Vaovao - 1/2 ”na 5/8 ″ matevina matevina matevina, vera voahidy ho an'ny fefy gilasy
1/2 ”na 5/8 ″ matevina matevina matevina, vera voahidy ho an'ny fefy gilasy
Glass antonony ho an'ny rink
Ny vera antonony dia ampiasaina amin'ny sisin'ny tehezan-trano. Ny vera antonony dia manao zavatra roa: mamela ny mpijery fijery tsy voafehy izy io, ary mahazaka kapoka mafy avy amin'ireo mpilalao miloka ao anatiny.
Ny vera iray dia misy 5/8 na 1/2 santimetatra ny hateviny, ny vera dia mila namboarina sy nohosorana. Mba hisorohana ny zoro tsy hikororohana olona dia mila zorony azo antoka ny fitaratra rehetra (zoro azo antoka manodidina 10mm)
Hockey fitaratra fiarovana
Amin'ny ankapobeny, azo antoka ho an'ny mpilalao sy ny mpankafy ny vera antonony.
Ny vera voarona PS Heat dia ho azo antoka kokoa noho ny vera voafehitra
LYD GLASS dia manolotra vera hockey avo lenta. Manolotra vera tsara toetra tsara ho an'ny fefy hockey izahay, ary ny vokatray dia nihoatra ny fenitra fitsapana an'i Etazonia sy Kanada.
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny vera hockey izahay, mifandraisa aminay anio.